Shirkada Hoteelada ee Marriott oo sheegtay in la jabsaday xogaha macaamiishooda… – Hagaag.com
Posted on 30 Nofeembar 2018 by Admin in Technology // 0 Comments
Shirkada Hoteelada ee Marriott ee caalamiga ah ayaa sheegtay in Burcad ay u dhaceen xogaha dadka macaamiisha ee ku keydsanaa computer-ka ee Hoteelada Starwood oo shirkada ka tirsan tan iyo 2014kii, waxaa la soo bandhigay xogaha shakhsiga ee dad gaaraya 500 oo milyuun oo ka mid ahaa dadka degga Hoteelka oo xogohooda khatar ku jira.
Shirkada ayaa raacisay macluumaadka shaaca laga qaaday oo 327 milyan oo isticmaalayaasha Hoteelka ahaa ayaa waxaa la socda faahfaahino dheeraad ah sida baasaboorada, telefoonada, cinwaanada e-mail-adooda, qaarkood ayaa dhici karta xataa in ay la socdaan macluumaadka kaararka lacagta lagu bixiyo.
Shirkada ayaa ogaatay in la jabsaday database-ka ay ku jireen xogaha macaamiisheeda kadib markii uu digniin bixiyay qalab ammaanka ee gudaha bishii September ee la soo dhaafay, baaritaan ballaaran kadib ayaa la ogaaday silsilada Hoteelada laga xaday xoggo wakhti hore.
Shirkadda ayaa sheegtay in ay ku wargelisay xukuumadda wixii dhacay, waxay kaloo bilaabi doonaan in ay u diraan emailo dadkii dhibaatada ka soo gaartay laga bilaabo maanta oo Jimco ah.
Shirkada ayaa sheegtay “in ay deg deg tahay in aan qiyaasno saameynta maaliyadeed ee sababay jabsashadan, laakin waxba yeeli meyso xaaladeena dhaqaale waqtiga fog”, waxay intaa ku dartay “shirkadu waxay la shaqeysaa shirkadaha ceymiska kuwaasi ayaan la wadaageynaa si ay u qiimeeyaan”.